GBM-12D-R V ကို & X ကို type ကိုပူးတွဲပန်းကန်ဘီဗဲလ်စက်
ပန်းကန်သတ်မှတ်ချက်များ၏ကျယ်ပြန့်အလုပ်လုပ်အကွာအဝေးနှင့်အတူစက် beveling GBM သတ္တုသံမဏိပန်းကန်။ ဂဟေဆော်ပြင်ဆင်မှုအဘို့အမြင့်မားသောအရည်အသွေး, ထိရောက်မှု, လုံခြုံခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစစ်ဆင်ရေးသည်။
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: GBM-12D-R ကို
GBM-12D-R ကိုV ကို & X ကို type ကိုပူးတွဲ ပန်းကန်ဘီဗဲလ်စက်
GBM-12D-R high efficiency metal plate ဘီဗဲလ်စက် နှစ်ဆဘက်များအတွက် turnable option နဲ့အတူဂဟေပြင်ဆင်မှုများအတွက်ကျယ်ပြန့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောအပြောင်းအလဲနဲ့မှာ beveling.Clamp ထူ 6-30mm နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူချိန်ကိုက်ဘီဗဲလ်ကောင်းကင်တမန်သည်အကွာအဝေး 25-45degree နှုန်း 1.5-2.6meters မိ။ ဒါဟာလုပ်အားချွေတာပေါ် alot ကူညီပေးသည်။
NO Model ။ GBM-12D-R ကိုသတ္တုပန်းကန် ဘီဗဲလ်စက်
feed မြန်နှုန်း 1.5-2.6metesr / မိနစ်
ညှပ်အကျယ် > 75mm
ဖြစ်စဉ်ကိုတာရှည် > 70mm
ရှုးပြား φ 93mm
အလေးချိန် ဘ 155KGS GW 195KGS
Turnable option ကို GBM-12D-R ကိုများအတွက်အလေးချိန် ဘ 236KGS GW 285KGS
750W မှာ 2. IE3 နျ Standard မော်တာ
3. မြင့်အသုံး 1.5-2.6meter / မိနစ်မှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
6. မက်စဘီဗဲလ်အကျယ် 18mm ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
ယခင်: စက် beveling GBM-16D မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သံမဏိပန်းကန်
နောက်တစ်ခု: စက် beveling GBM-12D သတ္တုပန်းကန်
နှစ်ချက်ဘေးထွက်ဘီဗဲလ် Tool ကို
သံမဏိပြားဘီဗဲလ် Tool ကို
GMMA-100L Edge ကြိတ်ခွဲစက်တွင် Pressur ...
GMMA-100L ဓါတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖိအားပေးသည့်စက်ပေါ်တွင်လေးလံသောသံမဏိပြားကြိတ်ခွဲစက်သည် ၀.၈၈ မီလီမီတာရှိလေးလံသောသံမဏိပြားများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောသံမဏိကြိတ်စက်ကိုတောင်းဆိုသည်။ 10-60 ဒီဂရီကနေပုံမှန် bevel ကောင်းကင်တမန်သည်။ T ...